EFCC weputara ijeri ijeri asaa na N7.9bn si Okorocha gaa Imo – Globalgistng
Home/Igbo/EFCC weputara ijeri ijeri asaa na N7.9bn si Okorocha gaa Imo
EFCC weputara ijeri ijeri asaa na N7.9bn si Okorocha gaa Imo
Obinna ChukwudiJune 12, 2020
Kọmịshọna Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) agwala onye gọvanọ nke Imo State na Senator na-anọchite anya Imo West Senatorial District na National Assembly, Senator Rochas Okorocha, ka ha jikere maka ụbọchị ya n’ụlọ ikpe.
Mgbe ọ na-ekwu okwu n’ụlọ ọrụ komputa dị na Port Harcourt, Rivers na Tọzdee, Onye isi Zonal, Usman Imam, kwuru na ejidere N7.9bn nke Imo n’aka onye gọvanọ mbụ n’oge nyocha EFCC.
Imam, onye bụ onye na-ahụ maka nyocha na-aga n’ihu nke onye bụbu gọvanọ, kwuru na kọmiti ahụ weghachiri N5.7bn n’aka gọọmentị dị iche iche na Imo iji kwụọ ụgwọ ọnwa na ụgwọ ezumike ọrụ nke ndị ọrụ.
Ọ sịrị: “Amalitere okwu ikpe steeti Imo na Enugu ma mgbe a kpọgara m mpaghara a, nyocha nke ebubo nrụrụ aka megide Gọvanọ Imo steeti mbụ, Rochas Okorocha, si na mpaghara Enugu gaa Port Harcourt maka nyocha ndị ọzọ.
N’ime oge ahụ, kọmịshọn ahụ meriri ihe dị ka N7.9bn n’ihe ndekọ dị iche iche. Ego niile enyerela gọọmenti Imo steeti sitere na N7.9bn weghachitere na Okorocha. E wepụtara ego ndị ahụ n’ụdị ya.
“E wepụtara N2.7bn na Mach maka ụgwọ ọnwa. Na gọọmentị PDP nke Emeka Ihedioha, ego karịrị ijeri N2.5bn n’ụdị ederede na nkwụsi ike anyị na-enyocha ya, ewepụtara ka ọ kwụọ ụgwọ ọnwa na ụgwọ ezumike nka n’ihi na ha bụ ego ewepụtara na steeti ya mere ọ ga-alaghachi na steeti.
“Mgbe ahụ gọọmentị Emeka lara ma gọọmentị a bịara, anyị nwere ndị fọdụrụnụ ego karịrị N2bn. Anyị nwere ike ịhapụ N514milion n’ọnwa gara aga n’ihi na etinyekarị ihe ruru N1.8bn na usoro ụlọ ikpe. Ndị ọrụ ngo gara ụlọ ikpe wee tụọ ego ahụ. Usoro a na-egbu. Ha nwere ego karịrị ijeri N1.8b nke a na-ahapụghị ”.
Ewezuga ego ewepụtara na Okorocha, onye isi ndị otu EFCC kwuru na a chọpụtakwara akụ nke ndị omebe iwu na Imo na Abuja wee buru kom komputa ahụ.
O kwuru na kọmịshọnị gbara akwụkwọ n’ụlọ ikpe maka ịhapụ ihe ndị o kpụrụ n’aka Okorocha.
O kwuru, sị: “Nchọpụta ahụ erutela elu ma anyị na-atụ anya na na mmechi, anyị ga-ebugbu onye gọvanọ mbụ.
Ọ bụ mgbe nyocha ka anyị mere atụmatụ akụ. Arefọdụ nọ na Imo, Owerri na ụfọdụ nọ na Abuja. Anyị gosipụtara akara ndị a na Abuja ma anyị etinyela usoro ikpe maka obere oge maka ikike ndị a. Ebumnuche ahụ bụ imechi nyocha ahụ, ọ ga-enwe ụbọchị ya n’ụlọ ikpe ”.
Imam kọwara na ebe ọ bụ onye duziri mpaghara ahụ na Jenụwarị, kọmiti ahụ enwetala N291.8million, Dollar 847,983 US, 390 pound, Euro 10,900 na 500 CFA.
Also Read: EFCC agbakeghachighị N7.9 ijeri n’aka m – Okorocha
O kwuru na kọmịshọ ahụ mebigakwara N1.1bn n’ihe ndekọ nke Bluekey Teknụzụ nke a na-ebo ebubo na ọ na-arụ ọrụ ponzi na igwu wayo ihe karịrị 8,926 ndị ihe karịrị N4.4bn.
Okwuru na EFFCC nwetere ikike mmefu nke gwongworo 96, ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri ebe ọdụ mmiri 226 nke mmanụ gas na 1million mmanụ nke a na-enyo enyo na-ejide n’aka gọọmentị Federal.
Imam kọwara na nwa nwoke ahụ natara arịrịọ 441, nyocharị nke ọma 262 ebe 159 na-eche ndụmọdụ gbasara iwu na mmadụ 20 ndị ọzọ gbara akwụkwọ n’ụlọ ikpe.
Banyere ihe ịma aka nke kọmitii ahụ, o kwuru, sị: “corruptionlụso nrụrụ aka ọgụ na nsogbu dị iche iche ya na-abịa. Ndi ajọ omume agaghị aka aka ha ka ị napụta ihe ha zuru. Ha ga-alụ ọgụ.
“Nke a abiawo ụdị nkwado mgbasa ozi. Ede blọgụ, otu Dikeocha Chukwuebuka, onye butere mpaghara a aka ọjọọ site na ibipụta foto adịgboroja nke ekpuchie ọnụ ụlọ ọrụ EFCC ejidere ugbu a ma na-aga ikpe ugbu a.
“Ihe ịma aka ndị ọzọ bụ imekọ ihe ọnụ, m na egbu oge azaghachi ajụjụ ndị ọrụ a jụrụ site n’aka ụfọdụ ụlọ ọrụ; ihe ịma aka banyere ịchọpụta okwu na-egbochi mmanụ na ezighi ezi ụlọ ọrụ maka ndị ọrụ ”.
“N’agbanyeghị ihe ịma aka ndị a, mpaghara ahụ ka na-agba mbọ na-ahụ maka ọrụ a, bụ ikpochapụ nrụrụ aka na Nigeria”.
Enwere ike efuola oru di iri na ato na Nigeria karia COVID-19
Etu esi eji ahihia mmiri kpochie masks
EFCC agbakeghachighị N7.9 ijeri n’aka m – Okorocha